Shiinaha Polycarboxylate Superplasticizer Soosaarayaasha iyo Shirkado | Divenland
Polycarboxylate ku saleysan Superplasticizer waa nooc cusub oo plasticizer ah oo ku habboon mashruucyada injineerinka ee weather kala duwan iyo ugu horayn isticmaalka loo isticmaalo aag cimilada kulul oo leh dareeraha iyo budada.
Waa mid wax ku ool ah yareynta biyo-xireennada baaxadda weyn ee suuqa taas oo heerka dhimista uu gaari karo illaa 35-40%. Sababtoo ah koloriin koloriinkooda iyo alkali-ga, oo aan lahayn wax bir ah oo bir ah, xasilooni sare & bey'ad saaxiibtinimo iyo dabeecad xumo, waxaa si diiran loogu soo dhoweeyay xooggaga sare ee la taaban karo ee tareenka, goobta, taraafikada, buundada iyo korantada. macaamiisha adduunka oo dhan. Waa superplasticizer heer sare ah dhismaha iyo sibidhka-ku-shubka.
1. Waxay ku habboon tahay waxqabadka sare ee la taaban karo, shubka qulqulaya qulqulka badan, la taaban karo cimri dherer, aluminous-cement sibidh diidmo ah, shubka sibidhka hooseeya ee sibidhka, uumiga daaweynaya uumiga, shubka iskiis isu dheellitiran iyo wixii la mid ah.
2. waxay ku habboon tahay qalabka wax lagu duubo, dabaqa is-dheellitirka, alaabada gypsum, shaabad isku-dhafan, madaafiic xoog leh iyo wixii la mid ah.
3. gaar ahaan ku habboon madaafiicda gaarka ah ee leh awood sare iyo qulqulka sareeya
muuqaal Budada midabka huruud ah ama cawlan ee cadcad
cufnaanta badan 350-500 kg / m3
Qoyaanka % 3%
luminta gubashada ≧ 85%
quruxsan （0.315mm mesh） % 90%
Waxyaabaha Koloriin (%) 0.1
Heerka yareynta biyaha hoobiyeyaasha ≧ 20%
0.15-0.40% (Marka loo eego saamiga miisaanka ee walxaha sibidhka)
Xiga: Budada Silicone Hydrophobic